Mafashama evamirionea vanoenda kunokonzera dambudziko repfuma muMonaco
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Mafashama evamirionea vanoenda kunokonzera dambudziko repfuma muMonaco
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Nhau Dzakanaka • Monaco Kupwanya Nhau • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Huru hudiki hweMonaco hwave hunokwezva kune vakapfuma-vane hupfumi vanoda kuviga mari yavo kubva kumitero iyo mambo anotonga weMonaco Prince Albert II akapa mwenje wegirini kune yekumhiri kwemadhorobha chirongwa chekuvandudza.
Nzvimbo yepasi inotonhorera yepasirese ine dambudziko repfuma yezvinhu nekuda kwekushaikwa kwenzvimbo ye2,700 mamirionea mazhinji, anotarisirwa kunogaramo mumakore gumi anotevera.
Monaco yakaenzana saizi seCentral Park yeNew York uye ine huwandu hwevanhu vangangoita makumi matatu neshanu nemana mumwe chete muvashanu weMonegasque. Vanoda kusvika makumi matatu nevashanu kubva pagumi rega rega vagari vemuMonaco vanonzi vane mamirionea, vane mukana wekujoinha navo kubva pasirese.
Iyo nyowani Portier Cove ecological nharaunda inofungidzirwa kuwedzera mahekita matanhatu (60 zviuru mativi emamita) kunharaunda yeMonaco iripo yemakiromita maviri emakiromita. Iyo yakadzoserwa nyika inobvumidza kuvakwa kwedzimba dzinodhura zana nedzimba.
Mari yazvino yezvivakwa muMonaco ndeye € 90,900 pamamirimita mita uye iri yechipiri chete kuHong Kong. Kugara kuri kuwedzera kudiwa uye kushomeka kwakanyanya kwekutumira kwakatumira mitengo yeMonaco "kuburikidza nedenga remba," sekureva kwaEdward de Mallet Morgan, wepasirose yepamusoro pekugara muLondon-based estate agency Knight Frank.
Iyo purojekiti inoonekwa seinokosha mukuenderera mberi kukura kweiyo microstate. Hapana imba nyowani-yekuvaka yakakwira kutengeswa kupfuura gore rapfuura, sekureva kwesangano rezvematongerwo enyika IMSEE, sezvakataurwa neGuardian.
Zvirongwa zvakapfuura zvehurongwa hwekudzosa hukuru zvakamiswa nekuda kwedambudziko remari ra2008 pamwe nezvinetso zvemamiriro ekunze. Bouygues, iyo kambani yekuvaka, yaisanganisira chirongwa chemabhiriyoni maviri emadhora, yakavimbisa kuti hapana kukuvara kwaizoitwa kune zvakatipoteredza.
Sekureva kwekambani, ese akakosha emhando dzegungwa akaendeswa kune imwe nzvimbo yekuchengetera ine 3D-yakadhindwa yekugadzira matombo emakorari akaiswa kuti agare mhuka dzesango.
Monaco ndiyo diki pamitero, uye haibhadhare mutero wemunhu, mutero wehupfumi kana mutero wemari inowanikwa. Kunyorera kugara kweMonaco, vanyoreri vanofanirwa kuratidza kuti vane kwavanogara, vhura account yeMonaco yekubhangi uye dhipoziti inosvika € 500,000, uye vagare muhukuru kweinenge mwedzi mitanhatu yegore.
Nyika inozvirumbidza ye opera imba, philharmonic orchestra, uye makonzati gore rese. Zvakare, Monaco inogadzira zviitiko zvakadai zvemitambo seMonte Carlo tenesi yakavhurwa uye Monaco F1 Grand Prix.